Michal Bieganski ayaa sharad ku galay Surrealism qeyb kamid ah sawiradiisa | Abuurista khadka tooska ah
Michal Bieganski waa a agaasimaha ku nool Sarajevo oo waxay ina tusaysaa Surrealism-ka ku nool taxanahan sawirrada ah ee na qaadanaya ka hor inta aan si aad ah u muuqan oo u caddayn marinnada.
Kaamiradiisa ayaa u adeegtay isaga ilaa yaraantiisii ​​si loo ogaado sannadihii uu ahaa qalab weyn oo loogu talagalay hirgelinta himilooyinkaaga farshaxanimo, marka laga reebo u adeegida si loo diiwaangeliyo dhacdooyinka qoyska iyo markii uu la baxay asxaabtiisa da'daas qaan-gaarka. Hadda wuxuu ina tusayaa aragtidaas oo leh sawiradan isdaba jooga ah.
Isaga oo muusig u eg mid kale oo ka mid ah damacyadiisii ​​waaweynaa, ayaa wuxuu garaacay durbaanno, wuxuu ka bilaabay waxbarashadiisa filimada jaamacada Lodz. Sannadkii 2007 wuxuu bilaabay inuu kamaradiisa ka qaado si uu u duubo riwaayado muusig halkaas oo uu ku noqday xirfad yaqaan taasna ay ugu adeegtay qaabkan gaarka ah ee muujinta aragtidiisa adduunka ku xeeran.
Shaqooyinka qaarkood oo aan ka heli karno waxyaabo gaar ah oo gaar ah isku darka tibaaxaha iyo hay'adaha u gaarka ah si loo sameeyo dib-u-hagaajin sawir leh oo noo horseedaya saameynta indhaha iyo dhalanteedka. Daqiiqado uu ku duubo kamaraddiisa oo u adeegta inuu ku jiro himilooyin gaar ah oo ku saabsan noloshiisa.
Kaliya maahan inuu raadinayo isdaba marin, laakiin wuxuu sidoo kale hayaa noocyo kale oo sawirro ah sida fiidiyowyo muusig sida kuwa aad ka heli karto degelkiisa oo na geynaya waddooyin kale. Halkan waxaan ku soo aruurineynaa qaar ka mid ah sawiro dheeraad ah oo ku saabsan Surrealism taas oo ina hor dhigeysa qaar asal ah oo hal abuur leh sida muraayadaas oo la saaray jirridda halka wajiga haweeneyda ka muuqata ay ka muuqato meesha gacantu aysan ka hor istaageynin inay sii wado eegida daawadayaasha.
Una sawirro taxane ah inaad ku haysato degel internet kuu gaar ah laga soo xigtay. Waxaad haysataa Flora Borsi oo ah farshaxanle kale oo sawir qaadista ah oo u ololeeya isdaba-marinta noocyada kale ee dhammaystirka halkan ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Sawir qaade Michal Bieganski
Farshaxaniistaha reer Brazil ee 16 jirka ah wuxuu abuuraa sawiro 3D ah oo ku dhow inay ka soo baxaan warqadda